France oo taageeraysa booliska gudaha Burundi iyo howlaha meleteri ay ka wado dalka Soomaaliya – Radio Daljir
Oktoobar 4, 2013 4:53 b 0
Bujumbura, October 4, 2013 – Dowladda France? ayaa cadaysay qorshe cusub oo ay ku doonayso in ay taageero meleteri ku siiso howl-galka AMISOM ee jooga Soomaaliya gaar ahaan ciidamada ka socda dalka Brundi oo ka mid ah dalalka ciidamadu ka joogaan Soomaaliya.
Kulan ay yeesheen safiirka France iyo madaxweynaha Burundi ayaa lagu sheegay in dowladda france ay taageero balaaran siinayso ciidamada qaybta ka ah howl-galka nabad illaalinta midowga Afrika ee AMISOM, kuwaas oo jooga gudaha dalka Soomaaliya.
Safiirka France ee Burundi Jean Lamy waxaa uu sheegay in dowladiisa ay mar kasta taageerto qaar ka mid ah dalalka Afrika, balse Burundi ay ka mid tahay meelaha sida wayn ay ishu ugu hayaan iyagoo ka caawinaya dhinacyo badan oo meleterigu ku jiro.
Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza waxaa uu qorshe wanaagsan oo mahad celin mudan ku tilmaamay nidaamka France ee taageerada ay ku siinayso dalka Burundi.